Howlgallo laga sameeyay degaano ku dhow Magaalada Dhuusamareeb | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Howlgallo laga sameeyay degaano ku dhow Magaalada Dhuusamareeb
Ciidamada Nabadsugida Soomaaliya Qeybta Galmudug ayaa howgallo qorsheysan oo Amniga lagu xaqiijinayo waxaa ay ka sameeyeen degaano kuyaalla Caasimadda dowlad Goboleedka Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb.
Ciidamada oo watay Gaadiidka dagaalka niicyadiisa kala duwan ayaa sigaar ah howlgalka uga sameeyay Wadada u dhaxeysa degaanka Ceeldheere iyo Magaalads Dhuusamareeb, halkaas oo mararka qaar lagu arko dagaalamayaal katirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha Ciidanka NISA ee Galmudug ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu yahay sugitaanka Amniga Magaalada Dhuusamareeb iyo weerarada ay mrarka qar geystaan Ururka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ilaa laga xaqiijinayo Amniga wadada xiriirisa Magaalada Dhuusamareeb iyo degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, wadadaas oo kamid ah waddooyinka ugu muhiimsan degaannada Galmudug.
Howlgalkaan Ciidamada Nabadsugida qeybta Galmudug ay ka sameeyeen degaano u dhow Magaalada Dhuusamareeb ayaa kusoo beegmaya xilli Dhuusamareeb ay kamid tahay Goobaha ay ka socdaan doorashooyinka Golaha Shacabka.
Howlgallo laga sameeyay degaano ku dhow Magaalada Dhuusamareeb was last modified: February 21st, 2022 by warsan radio
Madaxweyne Deni oo sheegay in wax ka beddel lagu sameeyey heshiiskii dekedda Boosaaso ee DP World
Guddoomiyaha Xisbiga Himilo Qaran oo Hambalyo u diray Shacabka Soomaaliyeed
NISA oo soo bandhigtay Sarkaal kasoo goostay Al-Shabaab & hub uu watay+Sawiro
Madaxweyne Qoorqoor oo saxiixay 10 Sharci ah oo cusub